यसरी जोगाउन सकिन्छ अनुहारलार्इ घामबाट
रामकला खड्का शुक्रवार, बैशाख ८, २०७४ 22009 पटक पढिएको
गर्मी बढिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कामकाजी महिला हुन् वा पुरुष सबैलाई बाहिर घाममा निस्कँदा छालामा विभिन्न खाले समस्या देखा पर्न सक्छन् । चर्को घामका कारण विशेषगरी अनुहारको छालामा सन वर्न हुने सम्भावना बढी हुन्छ । हामीमध्ये प्रायःले घाममा निस्कनु अगाडि सनस्क्रिन लोसन लगाएर हिँड्ने गर्छौं ।
हामीले लगाएको सनस्क्रिनले बढीमा तीन घन्टासम्म मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस पछाडिको समयमा सूर्यका किरणले छालामा विभिन्न टाटा पर्न सक्छ । त्यसैलाई सन बर्न भनिन्छ । सन वर्न हुन नदिन विभिन्न उपायहरू अपनाए छालामा टाटाहरू देखा परिसकेपछि ट्यान हटाउने फेसियलबाट मात्रै यसलाई कम गराउन सकिन्छ । यसको तरिका यस प्रकार रहेको छ ।
अन्य समयमा फेसियल गर्दा झैं सबभन्दा पहिले अनुहारको फोहोर हटाउन क्लिन्जिङ मिल्कको सहायताले क्लिन्जिङ गर्नु आवश्यक छ । ट्यान हटाउनका लागि विशेष प्रकारका सौन्दर्य प्रशाधनलाई नै प्रयोग गर्नुपर्छ । करिब दुईदेखि तीन मिनेटसम्म क्लिन्जिङ गरेपछि स्क्रब लगाउनुपर्छ ।
स्क्रब लगाउँदा छालाको सानासाना प्वालहरू खुल्ने गर्छ । यही खुलेका प्वाललाई बन्द गराउनका लागि टोनरको प्रयोग गर्नुपर्छ । टोनर लगाए पनि जेलको सहायताले हल्का मालिस गर्ने । यसले छालामा पानीको मात्रालाई सन्तुलित बनाउने काम गर्छ । यदि कसैको छाला तैलीय छ भने त्यसलाई तेलमुक्त बनाउने काम पनि यही जेलले नै गर्छ ।
जेल लगाएर पुसेपछि मसाज क्रिमले करिब १५ मिनेट जति छालाको मसाज गर्ने । यसरी मसाज गर्दा छालाको सुक्खापनमा कमी आई छालामा पानीको मात्रामा सन्तुलन गरी त्यहाँका कोषिकाहरूलाई सक्रिय बनाइदिन्छ । प्याक मसाज सकिएपछि ट्यान हटाउने खालकै प्याक लगाउनुपर्छ । प्याक लगाएर केही बेर सुकाएपछि त्यसलाई भिजाएर हल्का हातले मालिस गरी पुछ्नुपर्छ । यी सबै प्रक्रिया सकिएपछि मोइस्चराइजर लगाउने । यदि तुरुन्तै घरबाहिर घाममा जानु छ भने सन ब्लक क्रिम पनि लगाउन बिर्सनु हुँदैन ।
सन बर्न हुन नदिने उपाय
१.घाममा निस्कनु अगाडि सधैं सन ब्लक क्रिम लगाउनु पर्दछ । बजारमा पाइने विभिन्न एसपीएफका क्रिमहरू आफ्ना छालाको प्रकारहरू अनुसार छानेर ल्याउने र नियमित प्रयोग गर्नु पर्दछ । यदि घर बाहिरैको काममा बढी व्यस्त भइन्छ भने हरेक पटक पखाल्दै करिब दुई, तीन घन्टाको अन्तरमा सनब्लक क्रिम लगाइरहनु पर्छ ।
२.घाममा जानु अगाडि छाता ओड्ने बानी गर्नुपर्छ ।
३.सुक्खा छाला हुनेहरूले जहिले पनि मोइस्चराइजर लगाएरमात्रै सन ब्लक क्रिम लगाउनुपर्छ भने तैलीय छाला हुनेहरूले पनि आइल फ्रि मोइस्चराइजर लगाएपछि मात्रै सन ब्लक लगाउने गर्नु राम्रो हुन्छ ।
४. अनुहार धुनलाई साबुनको प्रयोग गर्नु हुँदैन । सधैं राम्रो गुणस्तरको फेसवासले मुख धुनुपर्छ ।
५. लामो यात्रामा निस्किँदा ह्याट वा क्यापको प्रयोग गर्ने र आँखालाई बचाउनका लागि सन ग्लास लगाउने गर्नुपर्छ ।
६. क्लिन्जिङ मिल्क नभए दूधको तरमा मह मिसाएर बनाएको लेपलाई अनुहारमा लगाएर १० मिनेट राखेर पखाल्ने गर्नुपर्छ ।
७. काचो नरिवललाई पिसेर त्यसमा मह हाली बनाएको पेस्टलाई अनुहारमा लगाएर करिब २० मिनेट राखेपछि पखाल्नुपर्छ ।
८. सुन्तलाको बोक्रालाई पिसेर त्यसमा रोज वाटर हाली बनाएको लेदोलाई अनुहारमा लगाएर केही समयपछि सफा पानीले धुनुपर्छ ।
९. नीमको पातलाई सुकाएर बनाएको धुलोले मसाज गरे पनि ट्यान हट्छ ।
कर्मचारी समायोजन नियमावली चाँडै 1100
'पूर्वराजाको अभिव्यक्ति निरर्थक' 2093
'हेबीवेट' नेताका प्रतिस्पर्धी हेबीवेट नै 5479
बेचिंदै गएका खोला 264
युवती विवादमा गोली चलाउने पक्राउ 1525
काठमाडौंको ठमेल अब 'सवारीसाधनमुक्त क्षेत्र' 662